तस्करको एम्बुसमा कसरी परे असई गोविन्द बिक ? पुरा पढ्नुहोस् र सम्मान स्वरुप सेयर गराै | Public 24Khabar
Home News तस्करको एम्बुसमा कसरी परे असई गोविन्द बिक ? पुरा पढ्नुहोस् र सम्मान...
तस्करको एम्बुसमा कसरी परे असई गोविन्द बिक ? पुरा पढ्नुहोस् र सम्मान स्वरुप सेयर गराै
धनगढी उपमहानगरपालिका—१२ जुगेडास्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका ईञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) गोविन्द बिक सधै झै शनिवार राति साढे ८ बजे गस्तीमा निस्किए । उनका साथमा थिए, प्रहरी जवान राम बहादुर साँउद ।
साँउद २०७५ असार महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत थिए । अछाम जयगढ स्थायी घर भएका प्रहरी जवान साँउदलाई त्यहाँको भूगोल र बस्तुस्थितिका बारेमा राम्रो जानकारी र अनुभव थियो । असई बिक भने त्यहाँ भदौ पहिलो साता ईञ्चार्जका रुपमा खटिएका थिए ।
अरु दिन राति गस्तीमा निस्किए पनि केही घण्टामै फर्किने बिक त्यो दिन भने उतै बस्ने गरी स्लिपिङ व्याग लिएर निस्किएका थिए । उनले निस्किने बेला फर्किन ढिला हुन सक्ने बताएका थिए । अबेर भए इटाभट्टातिरै बस्ने पनि उनले बताए ।
इटाभट्टा भएको क्षेत्र तस्करहरुले प्रयोग गर्ने सलियापार र बनकट्टी नाका नजिकै थियो । त्यहाँ नजिक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट छैन । सलियापारमा भने भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसवीको सुरक्षा पोष्ट छ । असइ गोविन्द बिक तस्करहरुलाई पछ्याउन राति त्यही नाका छेउमा रहेका ईटाभट्टा नजिक बस्ने उद्देश्यले गएका थिए ।
चौकीबाट निस्किएको करिब पौने घण्टापछि असइ बिकले जुगेडा ‘सी’ गाउँमा मानसिक सन्तुलन गुमाएकी एक महिलालाई केही युवाहरुले यौन दुव्र्यवहार गरिरहेकोले ती महिलालाई उद्दार गरी चौकीमा ल्याउन चौकीमा रहेका प्रहरीलाई निर्देशन दिए । असइ बिकलाई ती महिलाको उद्दारको लागि स्थानीय बासिन्दाले फोन मार्फत आग्रह गरेका थिए । इञ्चार्ज बिकको आदेश पाए लगत्तै दुई जना प्रहरीले ‘सी’ गाउँबाट ती महिलालाई उद्दार गरी चौकीमा ल्याइ पु¥याए ।
यहीबीचमा बिकले इटाभट्टा नजिक झगडा भइरहेको जानकारी पाएपछि सो को जानकारी स्थानीय अगुवालाई गराएका थिए । असइ बिकको उनीसंग पहिलो संवाद ९ बजे १६ मिनेट मा भएको थियो । र दोस्रो पटक तिनै युवासंग ९ बजेर ५२ मिनेट असइ बिकको कुरा भएको थियो । असइ बिकले ती युवासंग मोटरसाईकल भए चौकीमा दिन आग्रह गरेका थिए । तर ती युवाले आफूसंग मोटरसाइकल नभएको जानकारी दिएपछि असइ बिकले त्यत्तिकैमा फोन काटे । उनी त्यतिबेला घट्नास्थल नजिकैको ईटाभट्टा पुगिसकेको अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरी चौकीबाट घट्नास्थल कम्तिमा तीन किमीको दूरीमा छ । अझ ए गाउँबाट जनकल्याणमावि हुदै आउने हो भने यो दूरी पाँच किमी हुन आउछ । तर त्यहाँ जाने अरु दुई वटा बाटो छ । शिव मन्दिर भएर बस्तीको पुछारै पुछार दक्षिण पूर्वको बाटो र तेस्रो बाटो, बी गाउँबाट राना गाउँ भएर जाने । उनले दोस्रो बाटो प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जुन बाटो भएर घटनास्थल पुग्न करिब तीन किमी भन्दा बढी दूरी तय गर्नुपर्छ ।
असइ बिक साथमा एक जना मात्र जवान लिएर रातिको समय त्यति टाढा निर्जन ठाउँ किन पुगे ? प्रहरीले यस विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तस्करहरुको एम्बुसमा कसरी परे असई बिक ?
घटना हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र असइ बिकले त्यही नाकामा स्थानीय व्यक्तिहरुबाट अबैध रुपमा भित्र्याइदै गरेको सामान बरामद गरेका थिए । असइ बिकलाई उनीहरुले त्यो सामान जिल्ला प्रहरी कार्यालय नपठाउन र गाउँमा कुरा मिलाउन आग्रह गरेको बताइन्छ ।
तर असई बिकले मानेनन् । उनले त्यहाँ खटिएदेखि नै नाकामा कडाई गरेका थिए । नाकामा कडा निगरानी पनि गरेका थिए । सीमामा कडाई गरिएपछि बर्षौदेखि निर्वाध रुपमा त्यो नाकामा तस्करी गर्नेहरुका लागि असई बिक अबरोध भएका थिए ।
शनिवार राति असइ बिक आफै त्यहाँ गए वा तस्करहरुले झुक्याएर बोलाई हत्या गरे खुल्न बाँकी छ । स्थानीय बासिन्दाले असइ बिकलाई राति ठूलो मात्रामा तस्करीको सामान भित्रिदै गरेको सुराकी दिइ झुक्याएर बोलाई तस्करहरुले एम्बुसमा पारेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
‘असइ बिक तस्करहरुलाई नै एम्बुसमा पार्ने तयारीका साथ त्यहाँ गएको देखिन्छ, स्रोतले पश्चिम टुडेलाई भन्यो, ‘उनी साथमा हतियार, स्लिपिङ व्याग र त्यहाँको भूगोल र बस्तुस्थितिका बारेमा रामैसंग जानकारी भएका प्रहरी जवान साउँदलाई लिएर जानुले पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।’
‘बिकको लाशको प्रकृति र शरीरमा देखिएका चोटहरुले भने उनीमाथि पछाडिबाट आक्रमण भएको देखिन्छ ।’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘गर्धनमा धारिलो हतियारको चोट छ । यसले पछाडिबाट प्रहार गरेको देखिन्छ ।’ बिकले प्रतिवाद गर्नुअघि नै उनीमाथि आक्रमण भएको आशंकालाई उनको गर्धनमा देखिएको चोटले पुष्टि गर्छ । गर्धनमा आक्रमणपछि ढलेका बिकलाई त्यसपछि भने घाटीमा धारिलो हतियारले प्रयोग गरेको हुनसक्छ ।
यद्दपि उनीहरुमाथि आक्रमण गर्नेहरु ठूलो संख्यामा रहेको प्रहरीको अनुमान छ । चारैतिरबाट घेरा हाली बिक र उनीसंगै रहेका साउँदमाथि आक्रमण भएको देखिन्छ । त्यो क्रममा साउदले भने प्रतिकार गरेको हुनसक्ने घटनास्थलमा फेला परेका साँउदको बुट, मोवाइल, घटनास्थलमा भएको झडपका संकेतहरु, घट्नास्थलमा देखिएको रगत, उखुबारी कुल्चिएको लगायतका संकेतले देखिन्छ ।
आक्रमणकारीले सुनसान र एकान्त ठाउँको फाइदा उठाएको देखिन्छ । घटनास्थल बस्तीमाथि टाढा रहनु, तत्काल सुरक्षा दिन थप टोली पुग्न नसक्ने भूगोलका कारण आक्रमणकारीले असई बिक र साँउदमाथि सहजै आक्रमण गरेको प्रहरीको अनुमान छ । असइ बिकको हत्यामा स्थानीय तस्करहरुको संलग्नता भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
सोही अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले तस्करी गर्दै आएका र अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुलाई खोजी गरिरहेको छ । सोही क्रममा १३ जनालाई पक्राउ समेत गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक उत्तम सुवेदीले पश्चिम टुडेसंगको कुराकानीमा पक्राउ परेकाहरुको बयान लिने क्रम जारी रहेको र चाँडै बिकको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने दावी गरे ।
साउँदको खोजी र हत्यारा पक्राउ गर्न सयभन्दा बढी प्रहरी परिचालन
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले असइ बिकको हत्या र बेपत्ता पारिएका जवान साउँदको खोजीमा सय जना भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ । बिकलाई झै प्रहरी जवान साउँदलाई पनि हत्या गरी मोहना नदीमा फालेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
सोही कारण मोहना नदीमा प्रहरीले साँउदको खोजी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक प्रहरीले उखुबारी र आसपासका क्षेत्रहरुमा पनि साउँदको खोजी जारी राखेको छ ।
यतिबेला आरआइटी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीसमेत गरी सय जनाभन्दा बढी प्रहरी वडा नम्बर १० र १२ मा परिचालित छन् ।
राति साढे १० बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका असइ गोविन्द बिक र प्रहरी जवान साँउदको खोजी राति नै गरिनु पथ्र्यो । तत्काल त्यसको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिनु पथ्र्यो । तर बिहानमात्र चौकीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई खबर भयो । स्थानीय बासिन्दाले त एकै पटक बिहान घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि मात्र असइ गोविन्द बिक र प्रहरी जवान साँउद बेपत्ता भएको थाह पाए ।
त्यो भूगोल र त्यहाँको बस्तुस्थितिका बारेमा राम्रैसंग जानकारी भएका साउँद र पहिलेदेखि नै चौकीमा कार्यरत प्रहरीहरुले कम्तिमा उनलाई त्यहाँ रातिको समयमा त्यसरी नजान सुझाव दिनुपथ्र्यो । यहानिर पनि प्रहरी चुक्यो ।
जुगेडा, घुइयाँघाटदेखि फुलवारीसम्मको सीमा क्षेत्र अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यी नाकामा वर्षाँैदेखि निर्वाध रुपमा तस्करी हुँदै आएको छ । सीमा वारी बस्ने तस्करहरुको पारी भारतमा पनि राम्रो सम्बन्ध र कतिपयको दोहोरो बसाइ भएकोले नेपालमा अपराधिक घटना गरी सहजै उम्किने गरेको विगतका तमाम घटनाहरुले देखाउँछ ।
यो कुराको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नहुनु वा भएर पनि सीमामा तैनाथ गरिएका प्रहरीलाई साधन, स्रोत र हतियार उपलब्ध नगराउनु ठूलो लापरबाही हो । जुगेडा अस्थायी प्रहरी पोष्टमा दुई महिलासहित १० जना प्रहरी कार्यरत छन् । जहाँ एक थान मोटरसाइकल, दुई थान थी्र नट थ्री राइफल र एक थान पेस्तोलमात्र दिइएको छ ।
दुई फरक ठाउँमा घटना हुँदा प्रहरी चौकी खाली हुने अवस्था छ । घटनास्थलसम्म पुग्न न त प्रहरीसंग साधन छ । न त आफ्नै सुरक्षाका लागि हतियार । यो घटनाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्वयम् फिल्डमा खटिएका प्रहरीले पाठ सिके भोलि कम्तिमा गोविन्द बिक वा राम बहादुर साँउदको नियति अरुले भोग्नु पर्ने छैन ।
प्रहरी जवान साँउद पत्नी घटनास्थल पुगिन
प्रहरी जवान राम बहादुर साँउदकी पत्नी धनगढी आईपुगेकी छन् । ड्युटीमा खटिएकै समयमा पति साउँद बेपत्ता भएको जानकारी पाएपछि हिजो दिउँसो अछामबाट हिडेकी साउँदकी पत्नी आज बिहान जुगेडास्थित अस्थायी प्रहरी पोष्ट पुगिन ।
उनी त्यहाँबाट घट्नास्थल तर्फ गएको प्रहरीले बताएको छ । साँउदको अवस्था अज्ञात छ । उनका तीन वर्षीया र छ वर्षीया दुई छोरी र श्रीमती छन् ।
असई बिक र प्रहरी जवान साउँदबीच मिल्ने कुरा
असई बिक मदिरा खादैनथे । माछा मासुमात्र खान्थे । पूजापाठमा रुचि राख्ने धार्मिक प्रबृतिका जवान साउँद शाकाहारी थिए । उनी माछा मासु र रक्सी खादैनथे । चौकीको भान्सामा मासु पाके साँउदका लागि छुट्टै तरकारी पकाउनु पथ्र्यो ।
उनका बाजे, बुवा धामी थिए । उनमा पनि देउता चढ्थ्यो । पर्व तथा विभिन्न धार्मिक अवसरमा उनी चौकीभित्र काम्थे ।
Previous articleप्रह*रीले पायो यति ठुलो सफलता २ जना प्रह*रीलाई मार्ने ह*त्यारा पत्ता लाग्यो
Next articleभर्खरै दशैको मुखैमा सरकारको यस्तो निर्णय